Soomaali markale isku dayay in uu Khaat soo galiyo Sweden | Somaliska
Axadii ayaa magaalada Helsingborg waxaa lagu qabtay wiil dhalinyaro Soomaali ah oo da’diisa lagu sheegay 19-sano jir kaasoo khaat fara badan uu baabuurka uga buuxay. Booliska ayaa sheegay in markii wiilkaan uu soo galay xuduuda la waydiiyay in uu wado wax alaab ah isaga oo sheegay in aysan waxba gaariga u saarnayn.
Markii baaritaan lagu sameeyay ayaa laga helay gaarigiisa kartoomo ay ka buuxaan Khaat gaaraya 210 kg taasoo ah tirada xabsiga lagu galo. Torbjörn Persson oo ka tirsan Hay’ada Tullverket ayaa sheegay in wiilkaan laga yaabo in uu muteysto 1 sano iyo bar xabsi ah.
Ma ahan markii ugu horeysay ee Soomaali lagu qabto iyaga oo isku dayaya in ay Khaat soo galiyaan Sweden. Khaatka ayaa wadankaan sharci daro ka ah, sida inta badan wadamada kale ee Yurub.
masokor qaad xaa ugeyay
Ilaah ha la soo bad baadiyo
alle ha soo badbaadiyo
xaa kuu geeyay 219kg, eeboow 200 marduuf ma iska soo qaatidoo
oo yurub iyo gaallo.hadii qaadkii iska joojiyeen anakanah ma beeyrteena uuka baxaa maan iska joojino.anakuna kk anaka.iska joojinkarnee ciidankale noo soodira ESOM ah europesom cml si qaadka naloogala joojiyo ileen waxma qabsankarneee !!!!!!!!!!!